Ithegi: isantya sendawo | Martech Zone
Maka: isantya sendawo
Indlela iWebhusayithi yakho eNciphayo eLonakalisa ngayo iShishini lakho
NgoMgqibelo, Matshi 13, 2021 NgoMgqibelo, Matshi 13, 2021 Douglas Karr
Kwiminyaka eyadlulayo, kuye kwafuneka sifuduse indawo yethu siye kumamkeli omtsha emva kokuba umphathi wethu wangoku eqala ukucotha nokucotha. Akukho mntu ufuna ukutshintsha iinkampani ezibamba iindwendwe… ngakumbi umntu obamba iiwebhusayithi ezininzi. Ukufuduka kunokuba yinkqubo ebuhlungu kakhulu. Ngaphandle kokunyusa isantya, iFlywheel ibonelele ngokufuduka simahla ke kwaba yimpumelelo. Andizange ndikhethe, nangona kunjalo, ngenxa yokuba umsebenzi omncinci endiwenzayo ukwandisa iisayithi
Ngelixa ulawula ukubhaliswa kwesizinda kumbhalisi wedomeyini, ayisoloko ingumbono omkhulu ukulawula apho kunye nendlela isizinda sakho esisombulula ngayo onke amanye amangeniso e-DNS ukusombulula i-imeyile yakho, ii-subdomains, umgcini, njl njl. ithengisa imimandla, ayiqinisekisi ukuba indawo yakho iyakwazi ukusombulula ngokukhawuleza, ilawulwe ngokulula, kwaye inokusetyenziswa okwakhelwe ngaphakathi. Yintoni uLawulo lwe-DNS? Ulawulo lwe-DNS ngamaqonga alawula i-Domain Name System System
NgoLwesithathu, nge-30 kaJanuwari 2019 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 6, 2019 Douglas Karr
Sibhalile, ubukhulu becala, ifuthe lesantya kwindlela yokuziphatha kwabasebenzisi bakho. Kwaye, ewe, ukuba kukho impembelelo kwindlela yokuziphatha komsebenzisi, kukho ifuthe ekuphuculeni injini yokukhangela. Uninzi lwabantu aluliboni inani lezinto ezibandakanyekileyo kwinkqubo elula yokuchwetheza kwiphepha lewebhu kunye nokuba nomthwalo wephepha kuwe. Ngoku isiqingatha phantse sayo yonke itrafikhi yesayithi sihambile, kunyanzelekile ukuba sibe nobunzima, ngokukhawuleza okukhulu
Nanini na xa ndichaza inqanaba kubathengi bam, ndisebenzisa ukufana komdyarho wamaphenyane apho uGoogle elwandle kwaye bonke abakhuphisana nabo zizinye izikhephe. Ezinye izikhephe zinkulu kwaye zibhetele, ezinye zidala kwaye zihlala zibhadula. Okwangoku, ulwandle luyashukuma ngokunjalo… kunye neenkqwithela (utshintsho lwealgorithm), amaza (ukukhangela ukuthandwa kwezikrelemnqa kunye nemikhombe), kunye nokuqhubeka kokuthandwa komxholo wakho. Kukho amaxesha apho ndingachonga khona
NgoMgqibelo, ngoMeyi 28, 2016 NgeCawa, uDisemba 24, 2017 Douglas Karr
Sisebenze kunye nevithamini kunye nevenkile yokuxhasa kwi-intanethi ukunceda ukwandisa ukubonakala kokukhangela kunye namaxabiso okuguqula. Uthethathethwano luthathe ixesha elininzi kunye nezixhobo, kodwa iziphumo sele ziqalisile ukubonisa. Isiza sasifuna ukuphinda senziwe ngokutsha kwaye senziwe ngokutsha ukusuka emhlabeni. Ngelixa yayiyindawo esebenzayo ngokupheleleyo ngaphambili, ibingenazo nje izinto eziyimfuneko zokwakha ukuthembana kunye nokwenza lula ukuguqulwa kunye
Umxholo, ikhonkco kunye namagama aphambili kwi-2016 SEO
NgeCawa, ngoMatshi 13, 2016 NgeCawa, ngoMatshi 13, 2016 Douglas Karr
Ndiyakunyaniseka ukuba okukhona sifumana kwiinguqulelo zealgorithm kwiminyaka embalwa edlulileyo, kokuncinci ndijonga izixhobo zokuphucula kunye neenkonzo zokuxabisa njengoko zazinjalo ngaphambili. Sukuyibhida loo nto ngokubaluleka kwe-SEO. Ukukhangela okungokwemvelo kusekho isicwangciso esisebenzayo nesifikelelekayo sokufumana iindwendwe ezintsha. Ingxaki yam ayikho phakathi; zizixhobo kunye neengcali ezikhoyo phaya zisatyhalela amacebo avela kwabambalwa